> Resource > Video > HD Video Converter - Beddelaan HD Videos in qaabab kale
Wondershare HD Video Converter Waa Qeexid ka awood badan oo si sahlan loo isticmaalo High Video Converter oo sidoo kale loogu badalo karaa inta u dhaxaysa qaabab video oo caan ah. Waxay kaa caawinaysaa in aad fiican videos HD oo kaliya xaq u leeyahay inuu online saaxiibadaa iyo qoyskaaga wadaagaan aan qaabab ama xadeyn size.
Connect kaamirada si aad PC la cable USB ah. Waa in aad nuqulka videos in ay adag-wadid aad PC ka hor inta diinta ama waxa sixiddiisa la jecel yahay. Markaas, waxaad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah maxkamad Version of Wondershare HD Video Converter in baaritaan. Download, rakibi oo hore u ordaan barnaamijkan.
1 shuban Videos fiidiyo ah
Riix ah "Add Files" button xitaa your computer disc adag iyo dar files fiidiyo aad rabto in aad si loogu badalo in ay barnaamijka, sida mod, TOD, files qeexidda Sare (.M2TS, .MTS, .TS), iwm ah
2 Habee Settings wax soo saarka
Ka dib marka aad ku daray fiidiyo video, waxaad dooran kartaa qaab wax soo saarka ah oo sheeg tusaha on your computer si loo badbaadiyo files wax soo saarka. Tusaale ahaan, halkan waxaan ku doortaan MP4 HD sida qaab saarka ka "Qaabka Output" hoos-hoos badiyay dhanka midig.
3 Beddelaan HD Videos
Markii wax walba waa OK, guji "Beddelaan", iyo video Converter HD ka bedeli doono videos camera in ay qaabkan u soo xulay. Haddii aad doonayso inaad ku raaxaysan on iPad, iPod ama iPhone, xirmaan qalabka kuwaas oo si aad computer iyo iyaga u hagaagsan in qalab la Lugood.
Talooyin: Haddii aad rabto inaad la wadaagto aad videos on YouTube, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in iyaga loogu badalo in ay FLV, gasho on YouTube iyo iyaga geliyaan.
Professional-fasalka HD video Converter iyo aad u fiican SD video Converter
Beddelaan AVCHD fiidiyo video (M2TS, MTS, M2T) si video kale HD ama SD video.
Beddelaan Tapeless fiidiyo Video mod (JVC, Panasonic, Canon) iyo TOD (JVC) si AVI, MP4, wmv iwm
Dhammaataan badalo videos HD ay ka mid yihiin MTS, M2TS (AVCHD H.264), TS (MPEG-2), HD MKV (H.264, MPEG-2 HD), HD wmv (VC-1) iyo HD MOV (H.264, MPEG-4) in SD (Standard-Qeexid) videos iyo Cajalado.
Beddelaan dhexeeya qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video taaganyihiin MP4, MOV, 3GP, AVI, wmv, MKV, dhexena, MPEG-1, MPEG-2, FLV, ASF iyo NSV.
Waraaqda audio ka videos HD ama videos SD in M4A, WMA, regelingen, MP3, AAC, AC3, daanyeer, MKA, OGG, AU, AIFF, FLAC, iwm
Dalagyada video aad size haboon iyadoo la fogeynayo qataarrada madow ee video.
Jar aad video files si aad u hesho sida aad doonayso inaad video clips.
Samayso video gaar ah saamayn saarka gaar ah sida Gray, Emboss, xun, Old film.
Ku dar text ama image sida watermark in la shakhsiyeeyo aad video.
Ku dar fur-in Cinwaan qaab SRT la .MKV sida file il.
Hoos waxaa ku tutorial video ah: